अब घर–जग्गाको एकीकृत कर बार्षिक १ लाख ७४ हजारसम्म : कति हुनेले कति तिर्नुपर्छ ? [ सूचीसहित ] – Jagaran Nepal
अब घर–जग्गाको एकीकृत कर बार्षिक १ लाख ७४ हजारसम्म : कति हुनेले कति तिर्नुपर्छ ? [ सूचीसहित ]
काठमाडौ । आज हामी घर–जग्गाको एकीकृत करका बारेमा कुरा गर्छौ ।
आजको सामाग्रीमा काठमाडौं महानगरपालिकामा बनेका घर किनिएका जग्गामा कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषय समेट्छौ ।
घरसँगै घरले चर्चेको जग्गा पनि जोडिएर आउँछ। त्यसैले घर र जग्गाको रकम मूल्यांकन गरी कर तिर्नुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए।
सोही घर बहालमा दिइएको छ भने बहालवालासँगको सम्झौता अनुसार बहाल कर पनि तिर्नुपर्छ। बहालमा नगए पर्दैन।
सम्पत्ति करको दर नगरपालिका अनुसार फरक–फरक तोकिएको हुन्छ। काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र घर–जग्गाको एकीकृत कर बर्सेनि कति तिर्नुपर्छ ?
विभाग प्रमुख अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति कर लगाउँदा चार शीर्षकमा करको दर मूल्यांकन हुन्छ। महानगरले बाटोको प्रकृति हेरी जग्गाको मूल्य तय गरेको छ।
जसमा दस लाख रूपैयाँ प्रति आनादेखि पचास लाख प्रति आनासम्म पर्ने जग्गा छन्। यो बजार मूल्यमा आधारित नभई महानगरले निर्धारण गरेको मूल्य हो।
पहिले त व्यक्तिको जग्गाको मूल्यांकन हुन्छ। त्यसपछि त्यसमा बनेको घरको मूल्य जोडिन्छ, अधिकारीले भने, घर निर्माणको किसिमलाई पनि विचार गरिन्छ। उक्त जग्गामा टहरा मात्रै बनाइएको पनि हुनसक्छ। आरसिसी घर पनि हुन सक्छ। घर जति पक्का र भरपर्दो मानिन्छ, त्यसको मूल्यांकन धेरै हुने उनले जानकारी दिए।
घर र जग्गा भइसके पछि दुवैको सम्पत्ति मूल्यांकन हुन्छ। मूल्यांकन गर्दा सम्पूर्ण जग्गाको कति क्षेत्रफलमा घर बनाइएको छ, घर कति वर्ष पुरानो छ, कति तले बनेको छ जस्ता कुरा विचार गरिन्छ। व्यक्तिको घर पाँच वर्ष पुरानो छ भने, प्रति वर्ष एक प्रतिशतका दरले ह्रास (डिप्रिसिएसन) कट्टा हुन्छ, अधिकारीले बताए।
त्यस्तै अर्को हुन्छ घरको बनोट।
नयाँ घरहरू आरसिसी र स्टिल संरचनाका हुन्छन्। पुराना घर माटोको जोडाइ साथै काँचो इँटाबाट बनेका हुन्छन्। घरका यस्ता बनोटले नयाँमा भन्दा पुरानो घरमा लाग्ने कर घटाउन सहयोगी हुने अधिकारीले जानकारी दिए।
जस्तै, कुनै घर काँचो इँटा र माटोको जोडाइ र काठले बनेको भए वार्षिक एक हजार पाँच सय रूपैयाँ कर कायम गरिएको छ। ढुंगा–माटोको टहरा वा गोदाम घर, प्रिफ्याब हाउस छ भने कम्तीमा एक हजार आठ सय रूपैयाँ कर लाग्छ। त्यस्तै घर जति बलियो बन्दै जान्छ, करको मूल्यांकन पनि बढ्ने उनले जानकारी दिए।
अधिकारीका अनुसार सिमेन्ट जोडाइ भएको भवनको दुई हजार तीन सय रूपैयाँ र आरसिसी घरमा बढीमा दुई हजार छ सय कर तिर्नुपर्छ। यसमा जग्गाको क्षेत्रफल र बाटोको चौडाइ अनुसार छुट्टै कर जोडिन्छ। महानगरपालिकाको नियम अनुसार घर–जग्गाको मूल्यांकन एक करोड रूपैयाँभित्र भएमा ०.०१० प्रतिशतका दरले कर लाग्छ। अर्थात् एक करोडसम्मको घर–जग्गाको एक हजार रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ।
एक करोडभन्दा बढी र दुई करोड नकट्ने मूल्यांकन भएको घर–जग्गा भए करको दर कस्तो हुन्छ त ? यसमा एक करोडसम्मका लागि ०.०१० प्रतिशतका दरले र त्योभन्दा बढी मूल्यांकन भएको दुई करोडसम्म ०.०१५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्छ। अर्थात् सुरूको एक करोडको एक हजार रूपैयाँ र त्यसपछिको दुई करोडसम्म ०.०१५ प्रतिशतका दरले।
घर–जग्गाको एकीकृत कर बुझ्न तालिका हेर्नुस्ः
माथीको तोकिएको मापदण्डको हिसाब गरेर सूचीमा राखिएको छ । देख्नुभएको छ । १० करोड भन्दा माथी घरजग्गा भएकाले बार्षिक ६ लाखसम्म कर तिर्नुपर्छ । मुल्यांकनमा १० करोड टेक्यो भने एक लाख ७४ हजार ५ सय तिर्नुपर्छ । तर तपाईको सम्पत्ति एक करोडको मात्र मुल्यांकन भएको छ भने मात्र एक हजार तिर्दा पुग्छ ।